Maraykanka Oo Duqeyntii Ugu Horreysay 2020 Ka Fuliyay Soomaaliya – somalilandtoday.com
Maraykanka Oo Duqeyntii Ugu Horreysay 2020 Ka Fuliyay Soomaaliya
(SLT-Washington)-Taliska Ciidanka Mareykanka ee qaarada Afrika ee loo yaqaano AFRIOM ayaa faah faahin ka bixiyay duqeyn diyaaradeed oo saacadihii lasoo dhaafay uu ka fuliyay deegaan ka tirsan Gobolka Shabeellaha Hoose.
Qoraal kasoo baxay AFRICOM ayaa waxaa lagu sheegay in duqeynta ay ka dhacday deegaan lagu magacaabo Bacow oo ku yaalla duleedka Degmada Afgooye ee Shabeellaha Hoose, isla markaana lagu dilay 3 Sarkaal oo ka tirsan Al-shabaab.
Sidoo kale Qoraalka Taliska Ciidanka Mareykanka ee qaarada Afrika ee loo yaqaano AFRIOM ayaa waxaa lagu sheegay in howlgalka wax Khasaaro ah uusan soo gaarin dad shacab oo ka Agdhawaa deegaanka Bacow.
Dhinaca kale dowladda Federaalka Soomaaliya ayaa sheegtay in howlgal Ciidanka Danab ka fuliyeen Gobolka Shabeellaha Hoose lagu dilay Saraakiil badan oo ka tirsa Al-shabaab.
Waa duqeyntii ugu horeysay in Sanadkan Cusub ee 2020-ka Mareykanka uu ka fuliyo Soomaaliya gaar ahaan Gobolka Shabeellaha Hoose, iyadoo sanadkii tegay 2019 Mareykanka gudaha dalka uu ka fuliyay duqeymo badan oo lagu dilay xubno ka tirsan Al-shabaab.